Kenwood Drip Coffee Maker (CM200) – White | Buy online | SHOP.COM.MM
Kenwood Drip Coffee Maker (CM200) – White
Size: 17.2W x 24.3H x 19.4D cm
Kenwood coffee maker ​လေးက ဒီဇိုင်းလှရုံမက မြန်​လည်းမြန်​ဆန်​တယ်​ Read more Hide
ကော်ဖီဖျော်ချိန်မြန်တယ်။ ကော်ဖီမှုန့်ထည့် ရေထည့်ပြီး ခဏအကြာမှာပဲ သောက်လို့ရပြီ။ မြန်လို့အရသာမှာထိခိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ အရသာရှိရှိနဲ့သောက်လို့ကောင်းတယ်။ တစ်ခါဖျော်ရင် ၄ခွက်လောက်ရတယ်။ Read more Hide
Khine War oo
Kenwood ရဲ့ ကော်ဖီနှပ်စက်လေးက ကော်ဖီစစ်စစ်ကို သောက်ချင်သူတွေအတွက် အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ ပစ္စည်းလေးပါ။ ကော်ဖီကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် မရှိမဖြစ်ပါပဲ။ Read more Hide
The Kenwood CM200 Coffee Maker belongs to the Kenwood True collection,acompact and simple design that works perfectly with smaller living spaces. It can produce up to four cups of coffee each time, perfect for an enjoyable filter coffee experience at home. The permanent filter can be removed and washed after each use.
Stylish glass carafe
????????????? (CM200) – ?????????
Specifications of Drip Coffee Maker (CM200) – White